Isikhathi esiningi usebenzisa iphepha eli-brown elifika ne-grocery okungaba yiphepha lamazambane, leliphepha ulidabula ngesandla libe yishape oyifunayo. Isibonelo: Uma wenza i-petition yothando uyalidabula iphepha libe wuphawu lwenhliziyo (heart). Abanye benza ngamaphepha e-news paper, isibonelo: uma ufuna umsebenzi usebenzisa iphepha eline job advert oyifunayo. Uma kuyiphepha lokususa umuntu empilweni yakho noma ususa ixoki iphepha lakho liba wunxantathu (triangle).
uma wenza petition yemali ungasebenzisa u-newspaper lapho kunesithombe semali eningi noma usebenzise i-newspaper ekhuluma ngemali. Uma kungumuntu oxabene naye ofuna abe-nice kuwena ungasebenzisa iphepha likashukela eli-brown. Yonke into uyibhala ngama-lower case, ngalesikhathi uphoqa umuntu ubhala ngama-uppercase. Amagama awu-key we-petition yakho uyawa underliner, isibonelo: uma wenza ipetition yokuthi umuntu akufonele, lapho uthi khona ngifonele lokho uzoku-underliner.
Uma ufisa ukutshela umuntu into ethile, uzombhalela incwadi, isibonelo: Dear Themba xulu, ngicela ungiphuphe namhlanje ebusuku, ungifaka iring, phambi kwabantu, sishada. Imina ozithobayo, uZanele. Lokhu okubhala encwadini kuzokwenzeka ngempela kulowomuntu. Lencwadi uyibhala eduze nekhandlela lakho eliwumbala ohambisana nezimfuno zakho, bese uyakhuluma kwikhandlela, emva kwalokho kuncike ekutheni uhloseni ngencwadi, uma ufuna aphuphe okukwincwadi, uzoyifaka ngaphansi komcamelo incwadi. Uma ufuna akufonele incwadi uzoyigoqa, ubeke iphone ngaphezu kwayo, uma ungenaso isiqiniseko sokuthi yenzani ngencwadi yakho, uzolishisa iphepha emlilweni wekhandlela, ngalesikhathi livutha ulithathe ulibeke eplatin, eli clean, bese uma emnyango endaweni ephakeme uliphephethe umlotha wephepha uhambe nomoya.